ဘရိုက်တန်နဲ့ကစားသည့် တပွဲလုံးအားနည်းချက်များကို ပေါစခိုးလ်ပြော…. – FBV SPORT NEWS
ဘရိုက်တန်နဲ့ကစားသည့် တပွဲလုံးအားနည်းချက်များကို ပေါစခိုးလ်ပြော….
September 27, 2020 By admin Sports News
ပေါစခိုးလ်ဟာ ဘရိုက်တန် နဲ့ မန်ယူ ကစားကွက်နဲ့ နောက်တန်းအားနည်းချက်များကို News Now UK မှာယခုလိုပြောသွားခဲ့ပါတယ်…ပေါစခိုးလ်က ယခုပွဲ ကို ခင်ဗျားတို့ဘဲကြည့် ပထမတပိုင်း လုံးအချိန်တွေဖြုန်းနေခဲ့တယ်…နောက်ပြီးတော့ ပထမတဂိုးပေးလိုက်ရတယ် ဘရူနိုကြောင့် လို့ခင်ဗျားတိုမြင့်လိမ့်မယ်…မဟုတ်ဘူးဗျ နောက်တန်းမှာ လင့်ဒီလော့တို့ မက်ကွိုင်းယားတို့ အမှားပြ အမြန်တက် အမြန်ပြန်ဆင်းခဲ့ရမယ်…
အဲ့လို မဆော့ဘူး ဆိုရင် မန်ယူနောက်တန်းကစားသမား မပီသဘူးဗျ အဓိက လင်ဒီလော့ မက်ကွိုင်းယား ဟာ ဗီဒစ်နဲ့ ဖာဒီနန် အတွဲကို အတုယုသင့်တယ် လိုအပ်ရင် တိုက်စစ်ထိလိုက်ပါကစားနိုင်တယ်….နောက်ပြီးလိုအပ်ချိန်တိုင်း အမြန်နောက်တန်းပြန်ဆင်းဆော့ကစားနိုင်တယ်…
ဒီပွဲတပွဲလုံးမှာ ချီးကျူးစရာဆိုလို့ ရှောပါ ….တသင်းလုံး မြည်းတွေလိုကစားနေကြတယ်…ဟုတ်ပါတယ်….ဒါပေမဲ့ မိနစ်၃၈ မိနစ်နောက်ပိုင်းမှာ သူဟာ တိုက်စစ်ရော ခံစစ်ရော လိုက်ပါကစားလာပါတယ်….အရင်က အီဗရာကိုတောင် ကျနော်ပြန်လွမ်းမိတယ်ဗျာ…ရှော ဟာ ဒီခြေစွမ်းကို ထိမ်းထားရင် အသင်းအတွက်အရေးပါတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်…..
ထပ်ပြောစရာရှိတာ က တိုက်စစ်ကို အားမရပါဘူး ပေါ့ဘာ ဟာ အသင်းမှာနေရာပျောက်ပြီး တော့ အီဂါလိုကို ပေးကစားသင့်တယ်ထင်ပါတယ်…. ဒီထက်ထပ်လောင်းပြောချင်တာကတော့ ဒီအတိုင်း ဆက်ကစားနေမယ် အားစိုက်ထုတ်မှုမရှိဘူးဆိုရင် ဒီလိုနိုင်ပွဲကိုမက်နေရင် အဆင့်လေးသင်းစာရင်း မဝင်ဟု ဝေဖန် ရှုံချသွားခဲ့ပါတယ်
ယူနိုက်တက်လွဲနေသည့်အရာများကို ထောက်ပြလာတဲ့ အီဗရာ
မန်ယူ မှာ အီဗရာ အစားပြန်ရလိုက်ပြီဟု MEN News မှာ ဖာဂူဆန်ပြော